Vaovao - Miaraha tanana hiady amin'ny valanaretina
Tamin'ny 4 martsa 2020, fiaramanidina iray avy any Brezila no tonga soa aman-tsara tany Shanghai, nitondra sarontava 20 000 PFF2 nomen'ny Lianhe Chemical Technology Co., Ltd., ho an'ny Vokovoko Mena Taizhou. Ity no andiany fahadimy amin'ny famatsiana ara-pahasalamana natolotr'i Lianhetech hatramin'ny COVID-19. Tia ny fipoahan'ny olona tsy manam-po, manome andraikitra ny malala-tanana. Mba hanohanana tanteraka ny fisorohana sy ny fifehezana ny COVID-19 ary hitazomana ny soatoavin'ny orinasa "mandray andraikitra", hatramin'ny faran'ny volana janoary dia nanomboka nanetsika tanteraka ny loharanon-karena erantany ny Lianhetech, tamin'ny alàlan'ny sampana UK sy ny mpanjifa any ivelany hividy sarontava. ary fitafiana miaro tsy fahita any Sina. Mpiara-miasa eto an-toerana sy any ampitan'ny orinasa, mpanjifa handrindra ny fividianana, ny fitaterana, amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra amin'ny saron-tava, akanjo miaro miverina any Shina. Tamin'ny 8 feb, saron-tava 100.000 novidian'ny Fine Organic Limited, sampana britanika iray, no tonga tany Sina. Tamin'ny faha-12 febroary, setina miaro 1.930 no tonga tany Chine, ary ny 17 febroary dia efa ho 2000 ny sarontava ary maherin'ny 600 ny akanjo fiarovan-tratra tonga tany Shina. Ny mpanjifa any ivelany an'ny orinasa FMC dia nanampy ny orinasa hividy akanjo miisa 500 sy saron-tava 20.000 avy any Danemarka sy Brezila. Hatreto, Lianhetech dia nanome sarontava maherin'ny 120.000, valizy miaro miisa 3.000 ary fitaovana hafa mitentina 70000 yuan mahery ho an'ny Fikambanana Vokovoko Mena Taizhou. Olana amin'ny lafiny iray, tohano amin'ny lafiny rehetra. Aza matahotra ny filana fiadiana, fa ahy koa ny mitafy Lianhetech Technology dia hanohy hanaraka ny fivoaran'ny valanaretina ary handray anjara amin'ny fandresena amin'ny ady amin'ny valanaretina.